I-OnePlus entsha iya kulawulwa yi-Snapdragon 821 | Iindaba zeGajethi
I-OnePlus entsha iya kulawulwa yi-Snapdragon 821
Abafana eQualcomm babona indlela abavelisi abangakumbi nangakumbi abakhetha ngayo ukuyeka ukusebenzisa iiprosesa zabo, bezinikezela ekusunguleni ezabo. Isamsung, iHuawei, iMediatek, kunye neXiaomi ngabona bavelisi baphambili okwangoku beshenxisa iprosesa enkulu yeQualcomm. Ngaphandle kokukhathazeka, inkampani iyaqhubeka nokusebenza isungula iprosesa ezintsha kwaye izama ukufikelela kwizivumelwano ukuze abavelisi baqhubeke nokuthemba umsebenzi wabo olungileyo. Njengoko inkampani isandula ukubhengeza, IQualcomm yokubonelela ngeeprosesa kwimodeli elandelayo ye-OnePlus, ogama elilindelekileyo lokufika kwimarike yehlobo lonyaka ozayo.
I-Qualcomm iqinisekisile ngeakhawunti yayo ye-Twitter isivumelwano ekufikelelwe kuso ne-OnePlus, ibhengeze ukuba imodeli yayo elandelayo iya kulawulwa yi-Snapdragon 821, iprosesa ephucula zombini intetho, ukusebenza, isantya, amandla kunye nomzobo weetheminali eziyiphumezayo. Isiphelo esitsha siya kusebenzisa i-16 mpx, 5,5-intshi ye-Sony inzwa yesisombululo esine-HD epheleleyo, i-64 GB yokugcina, i-6 GB ye-RAM kunye nebhetri ye-3.000 mAh. Oko kukuthi, ukuba ixabiso liza kunyuka liye kwi-479, i-80 yeedola ngaphezulu kweendleko ze-OnePlus 3.
I-OnePlus yinkampani encinci leyo Kancinci kancinci kuye kwafumana ukuthembakala kwabasebenzisi bayo kwaye okwangoku yenye yeempawu ezithandwayo kubasebenzisi abaninzi abadiniweyo kukuhlawula ngaphezulu ukonwabela imisebenzi efanayo neetheminali eziphezulu kwimarike. Inkqubo yesimemo inkampani eyaqala ukusasaza isiphelo sayo yabangela ukungonwabi okuninzi, okwanyanzela inkampani ukuba iyishiye izame ukuphucula umfanekiso wayo phambi kwabasebenzisi abathi, bediniwe kukulinda, bahlala bekhetha abanye abavelisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-OnePlus entsha iya kulawulwa yi-Snapdragon 821
Iinkcukacha ezintsha malunga neHTC Bolt kunye nokucaciswa kwayo kuvuza
I-YouTube iyahambelana nevidiyo ze-HDR ezibonelela ngomgangatho ophezulu womfanekiso